ပြtheနာကိုဖန်တီးပါ၊ ပြီးနောက်ဖြေရှင်းချက်အတွက်အခကြေးငွေပေးပါ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2006 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 21, 2014 Douglas Karr
မှာဆက်ဖတ်ရန် OneCare တိုက်ရိုက်antivirus updates, backups, updates, & customer service တို့ပါဝင်တဲ့ software ။ နောက်ဆုံးတော့မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ဟာသူတို့ကြီးကျယ်တဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုမဖန်တီးနိုင်ဘူး၊ သူတို့အတွက်ပိုက်ဆံအများကြီးကုန်ကျတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနောက်ဆုံးလက်ခံလိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ယုတ္တိနည်းသောတစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းမှာမိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည်၎င်းတို့ဖန်တီးခဲ့သည့်ပြtheနာများကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်ရမည့်အခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြင့်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဤသူကားငါ၏မိတ်ဆွေကောင်း၊ စုစုပေါင်းအကျိုးစီးပွားပconflictိပက္ခဖြစ်သည်။ ဝါရှင်တန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်အဂတိလိုက်စားမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်ဥပဒေကြမ်းများရေးဆွဲခြင်းနှင့်အတူတကွယှဉ်ပြိုင်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည် ဤနေရာတွင်အဓိကပြconcernနာမှာ Microsoft သည် Antivirus နှင့် Security developer များကိုရှာဖွေရန်အချိန်ယူမည့်လုံခြုံရေး loops များနှင့်ပြproblemsနာများကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် software တွင်ထားခြင်းဖြင့်အမှန်တကယ်အမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ ဒါကမိုက်ခရိုဆော့ကိုဒီ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ထိပ်ဆုံးနေရာမှာထားတယ်။ ၎င်းသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုအနိုင်ယူပြီးမိုက်ခရိုဆော့ဖ်အတွက်အကျိုးအမြတ်နောက်တစ်မျိုးဖြစ်နိုင်သည်။
ဝိုး။ ဒီဟာကိုဘယ်သူ့ကိုမှကြည့်နေတာလား။ မည်သူမဆို?
14:2006 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 35
ဒါကမင်းရဲ့ကော်ဇောထဲကိုအိတ်တစ်လုံးထည့်လိုက်တဲ့နယ်လှည့်အရောင်းအ ၀ ယ်သမားတွေကိုသတိရစေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်သင်ဟာသရုပ်ပြကြည့်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်
၀ န်ဆောင်မှုမပေးခင်ကြွက်တွေနဲ့ bug တွေအားလုံးကိုသူနဲ့သယ်ဆောင်လာတဲ့သုတ်သင်ပယ်ရှင်းရေးသမားဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲ။
Micro $ သွားကြဖို့နည်းလမ်း! ယခုတွင်သင်သည် '' ပိုက်ဆံအကာအကွယ် '' အတွက်ချီကာဂိုဂိုဏ်းချုပ်များအားအများပြည်သူအားမောင်းထုတ်နေသော '၃၀' အဖွဲ့တွင်ပါဝင်သည်။ သို့မဟုတ်လျှင်သူတို့သည် Windows ကျိုးပဲ့သွားနိုင်သည်။